ရတနာ သုံးပါးကြေးဇူးဖွငျ့ COVID_19 ရဲ့ အသကျဘေးမှ လှတျမွောကျခဲ့သူ – Daily Feed MM
Admin_John | April 15, 2020 | News | No Comments
“ရတနာသုံးပါး ဂုဏျကြေးဇူး”ကွောငျ့ဝူဟနျ ဗိုငျးရပျ ရောဂါ မှ “သရှောပွနျ”ခဲ့သူ တဈဦး အကွောငျး”
ကြှနျတျော ခံစားခဲ့ရတဲ့ “ဝူဟနျးဗိုငျးရပျ”အကွောငျးလေးပါ။
ဘာကွောငျ့-ဝူဟနျး ကြှနျတေျာ့ ဆီကို ဆိုကျဆိုကျမွိုကျမွိုကျရောကျလာသလဲ?
မလာအောငျ ဘယျလိုလုပျနိုငျ ဆိုတာ နဲ့မလှုပျနိုငျဘဲ “နာရီပေါငျး (၁၄၀) ကြျော” ကိုမခံသာတဲ့ “မရာဏာပိဒုက်ခ” ကိုကြျောလာခဲ့ပုံအတှအေ့ကွုံလေးပါ။
ပထမဉီးဆုံး-“သရှောပွနျ”ခဲ့တာ ဟာ “ရတနာသုံးပါး ဂုဏျကြေးဇူး”ကွောငျ့ဆိုတာပါပဲ။
(“Ventilator” မှာ-သမေငျးနဲ့ရငျဆိုငျနရေတဲ့အခြိနျမှာ မတ်ေတာစူးစိုကျပို့ပေးနခေဲ့ကွတဲ့,
ဆရာတျော ခမောဓမေမ်မာ၊အောကျဈဖို့ ဆရာတျော၊တိပိဋ်ဌက ရှစေငျဆရာတျောဘုရားကွီး၊ဂုတျထိပျဆရာတျောဘုရားကွီး ဦးပညာဝံသ ၊ထိသိ စှနျးလှနျးဆရာတျော ဦးသုမန၊သဘာဝရိပျသာ မှ ဆရာတျောအမှုးထားပွီး ဘုနျးဘုနျးမြား ဆရာလေးမြား၊မိုးကုတျရိပျသာ မှ ဆရာလေးမြား ။ပွညျ ဝိဇ်ဇောဒယ မှ ဆရာသမားမြားအခြိနျပွညျ့တရားအားထုတျပွီး သစ်စာတိုငျတညျမတ်ေတာပို့နတေဲ့ မိခငျကွီး ဒျေါအေးမွငျ့ ၊ဇနီးမအေးမိုး နဲ့သားသားခရစ်စ ၊ ညီမငယျ မဖွူ အကိုကွီးကိုဝငျး အမကွီး မညောငျ မသူဇာ တို့ကိုအထူးကြေးဇူးတငျပွီ မတ်ေတာကိုခံစားခဲ့ရပါတယျ။ )
သူငယျခငျြး “မဥမ်မာလှိုငျ”ကလဲ-“သဈတံခါးဆရာတျောဘုရားကွီး”ကို အပူကပျ”မတ်ေတာပို့ ပေးဖို့ လြောကျထားခဲ့ပါတယျ”။
“အရိယာ သူတျောကောငျးကွီးမြားရဲ့မတ်ေတာ”နဲ့သတှေငျး ကလှတျခဲ့ပါပွီ။
အကွိမျကွိမျ ဦးတိုကျ ကနျတော့ပါတယျ ဘုရား။
အတိတျ က ပွုခဲ့တဲ့”ဝဋျ”တှေ အကြိုးပေးဖို့အခြိနျ မှီလာလို့ပါ။
“ပိုငျးလော့ဆရာတျော”ပွောတဲ့-“အခြိနျတိုငျး တှေးနရေငျး ဘဝ ပွောငျးသညျ”ဆိုတဲ့အခကျြကွောငျ့ပါ။
ကြှနျတျော ဟာ မနတေတျ/မထိုငျတတျ“ဝူဟနျးဗိုငျးရပျ”ကို နေ့/ညအခြိနျပေါငျးမြားစှာ source ပေါငျးမြားစှာက follow လုပျပါတယျ၊”covid ဂုဏျတျောပှါးမြားနတေယျ”လို့ပဲ ဆိုပါတော့။
အဲ့ဒီတော့ လာပွီပေါ့ ကိုယျ့ဆီကို၊ဘာဆနျးမလဲ။အခြိနျတိုငျးတှေးနရေငျး ဘဝ ပွောငျးပွီလေ။ဒီအခကျြက ရှောငျလို့ရပါတဲ့ covid ကို follow မလုပျကွပါနဲ့-ကွောကျလဲမကွောကျကွပါနဲ့ ၊သောက လဲမရောကျကွပါနဲ့။ကိုယျ့တရားကိုယျ အာရုံပွုရငျ အလှယျတကူလှတျမွောကျနိုငျပါတယျမနတေတျတာ အခုမှ မဟုတျပါ။
“ရှဝေါရောငျအရေး”တုနျးကလဲ ဒေါသ ဝမျးနညျးမှုတှနေဲ့ အရငျဆုံးပူလောငျသူကကိုယျပါ။စီးပှါးတှပေကျြ ပစ်စညျးတှေ ဆုံးရှုံး ကွုံခဲ့ပွီးပါပွီ။အခြိနျတိုငျးတှေးနရေငျး ဘဝပွောငျးခဲ့ရပါတယျ။“အမြိုးသမီး တဈယောကျ”က”သူနာပွုဆရာမလေး”ကို”စကျရုပျ မို့ အိမျမှာ နေ ရမှာလား?” တို့”ပွညျတျောပွနျ တှေ သတျပဈ တဈကောငျမှ အထငျမကွီးဘူး”-ဆိုတဲ့ပိုိ့ဈတှကွေောငျ့ ဝမျးနညျး စိတျမကောငျး ဖွဈရပါတယျ။
ဒါဟာ-“အကုသိုလျစိတျ”ပါ။”အကုသိုလျ” အကြိုးပေးတှေ အခြိနျမှီပွီလေ ။ဒါဟာ ရှောငျလို့ရတဲ့အခကျြပါ။
ဒါက-“ဝူဟနျးဗိုငျးရပျဈရောကျလာခွငျးအကွောငျး”ပါပဲ၊အလှယျတကူ ရှောငျလို့ရတဲ့ အခကျြပါ။
(၂) ဆေးရုံက Intensive Care မှာventilator ပျေါမှာ နာရီ (၁၄၀) ကြျော
ကြှနျတျော “အပငျြးဖြား”ပွီး”တဈပါတျ”အကွာမှာခြောငျးဆိုး လာပါတယျ။
(၃)ရကျလောကျကွာတော့ နှာခေါငျးထဲ “ဆီကွျောအနံ့”လိုရပွီး အသကျရှုကွပျ လာပါတယျ။တကယျတော့ ဘာ အနံ့ မှ မရှိပါဘူး။
“အောကျစီဂငျြ level (၈၇)”အထိထိုးကလြို့”ဆေးရုံ”ရောကျခဲ့ပါတယျ။
ဆေးရုံမှာ-“အောကျစီဂငျြ”ပေးထားတဲ့ကွားကတကျမလာဘဲ -“အဖြား (၃၉)” ကနေ မကဘြဲ,”နှလုံးခုနျှုနျး,သှေးပေါငျခြိနျ”ကသြှားလို့သတိလဈ သလိုဖွဈသှားပါတယျ။ဆရာဝနျတှေ/ဆရာမတှကေ-“မသှားနဲ့ ငါတို့နဲ့နပေါ”-ဆိုပွီးတဈယောကျဖကျ ထားပွီး ဝိုငျးအျောနတော ကွားပါတယျ။ခကျြခငျြးပဲ-ventilator machine ပျေါတငျတော့တာပါပဲ။”မဆေ့ေးဆရာဝနျ”က”မဆေ့ေး”ပေးပွီး-“လညျခြောငျးအပေါကျဖောကျ””ပိုကျ”မြိုးစုံထညျ့”နှာခေါငျးပိုကျ နှလုံးခုံစကျအစုံ”ပါပဲ။” Ventilator ပျေါတငျ”ပွနျရှငျတဲ့သူ အရမျးနဲတယျ”ဆိုတာသိထားပါတယျ။
မဆေ့ေးပွယျတော့ ဆရာဝနျတှကေ ရှငျးပွကွပါတယျ။အိပျရာ လဲဖြာကပျပေါ့၊လှုပျလို့လဲမရတော့ပါဘူး။ကြှနျတျော ဟာ “တရားကိနျးသူ”မဟုတျပါ။”အညံ့စား ပုထုဇဥြ တဈဦး”ပါ။
တရား ကိုမရဏာပိဒုက်ခ ကို ရငျဆိုငျနိုငျလောကျအောငျနကေောငျးစဉျက အားမထုတျထားခဲ့ပါ။
“ပုထုဇဉျ တဈယောကျအနနေဲ့ဘယျလိုရငျဆိုငျမလဲ?”ဆိုတာစ စဉျးစားရတော့တာပါပဲ။
တဈခုတညျးသော အားကိုးရာ “ရတနာသုံးပါး”ပါပဲ။
“အဖြား (၃၉ံ)”နဲ့အသကျမနဲရှုနရေတာဘယျက တရား စ မှတျမလဲ?
လြော့ခလြိုကျတာနဲ့-“သဘာဝ သဘောခန်ဓာ” စမွငျတော့ပါပဲ။အလုပျ စ ရပွီပေါ့။”ဝဒေနာ”ကပွငျးလှနျးလို့ မြောသှား/လှတျသှားပွနျတာပဲ။ဒီတခါ-“စှနျးလှနျးဆရာတျော ဦးသုမန”-ဆေးရုံမတကျခငျ”အေးစငွေိမျးစေ” တရားပေးထားပါတယျ။”အာနာပါန”နဲ့ “အေးစငွေိမျးစေ” စတငျပါတယျ။စပွီး တညျငွိမျ လာပါပွီ။
နဲနဲ “စိတျ”နဲ့ “ရုပျ”ကိုခှါလာနိုငျတော့-“ပွညျ ဝိဇဇောဒယ” ရဲ့ “အရှုဈာနျ”တငျတော့တာပဲ။”ရုပျ”ပျေါမှာ”ဈာနျ”နဲ့ခှါသလို-“အောကျစီဂငျြ”လဲ တကျလာပါတယျ။နောကျ တော့-မြောလိုကျ မသှေ့ားလိုကျ နဲ့ လုံးခွာလိုကျနပေါတယျ။
သတိရ တာနဲ့ “သဲအငျးဆရာတျောကွီး”ရဲ့ “ကော့မူးရှုကှကျ”တရားတငျတော့တာပဲ။”ရှုကှကျ”က-“ဖောကျပွနျတဲ့ရုပျသဘော”နဲ့”သိတတျခံစားတတျတဲ့ နာမျတရားလေးပဲရှိတယျ”-ဆိုတာ။
“ဘာဘဲ ပျေါလာ-ခြုပျပြောကျသှားတာလေးတှကေငါမဟုတျဖူး”-လို့လိုကျ သိပေးနပေါတယျ။
“ငါဖွငျ့သရေတော့မယျ မိသားစုနဲ့ခှဲရတော့မယျ”-ဆိုတဲ့”သောက”တှမေရှိတော့ပါဘူး၊အရာရာ တရစပျ ခြုပျနတောကိုး။ဉာဏျအား နဲနဲ အထောကျအကူ ရတာနဲ့-
“သဘာဝ ဆရာတျော”ရဲ့-“အနတ်တ သဘောခန်ဓာ လေးတှအေခုကွညျ့/ အခု မရှိတော့ဘူး”-ဆိုတဲ့”ရှုကှကျ”နဲ့ လိုကျတယျ။
“ဆရာလေးခမောရံသီ”ရဲ့ -“နဂိုကမှ ဘာမှမရှိဘဲတရစပျ အစားထိုး ဖွဈ/ပကျြ နကွေတာ”- ကို တငျရှုပါတယျ။
“စှနျးလှနျး ဦးသုမန” ရဲ့ –
“ငါခံနရေတယျ”-ဆိုတာကလှတျလာပါပွီ။”မိသားစု”ကိုလညျး မစှဲတော့ပါဘူး၊အေးအေးဆေးဆေး ဘဝကူး နိုငျပါပွီ။
“မကောငျးတဲ့ လားရာဂတိနိမိတျ”တှေ လုံးဝ မတှရေ့ပါဘူး။
ပုထုဇဉျတဈယောကျအနနေဲ့အပါယျတံခါး တဈဘဝ လောကျပိတျအောငျ လုပျနိုငျခဲ့ပါပွီ။
“မငျးအသကျဘေးကလှတျပွီ”ဆိုပွီး ဝမျးသာအားရ လာ ပွောကွပါတယျ။
အဲဒီကနေ-ရိုးရိုး ward မှာ အားပွနျရှိအောငျနရေပါတယျ။အခုပဲ ဆေးရုံက စိတျခရြပွီ မို့ အိမျပွနျခှငျ့ရပါပွီ။
“ဆေးရုံ”က “ဝနျထမျးမြား”ဟာ-ကြှနျတျော အသကေောငျတ မြှပကျြစီးနတောကိုမငွိုမငွငျ/ယုယုယယ ပွုစုကွတာ အံ့လို့မဆုံးပါဘူး။
ဘယျလိုအသားရောငျ/လူမြိုးကိုဖွဈဖွဈမတ်ေတာထားနိုငျ “NHS National Healthcare Services (United Kingdom) ဝနျထမျးတှေ”-ကိုကွညျ့ပွီး- မကျြရညျဝဲ တဲ့အထိ ကြေးဇူးတှေ တငျမိပါတယျ။
ပွောတာလညျး မြားသှားပွီ။”အကုသိုလျ အချေါတရား”တှေ ရှောငျကွပါ၊
“စိတျညဈနှမျး”စေ “သောက ဒေါသ”ဖွဈစမေဲ့ ပိုိ့ဈတှေ မရှယျကွပါနဲ့။မွငျရငျလဲ သူငယျခငျြးတှကေိုပူလောငျ “အကုသိုလျ”မြားအောငျ မရှယျကွပါနဲ့။အားလုံးဘေးဆိုးကွီးကလှတျမွောကျကွမှာပါ။
ခမျြးသာကွပါစေ၊ အေးငွိမျးကွပါစေ၊သံသရာ ဝဋျဆငျးရဲမှ လှတျမွောကျနိုငျကွပါစေ။
“ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်ကျေးဇူး”ကြောင့်ဝူဟန် ဗိုင်းရပ် ရောဂါ မှ “သေရွာပြန်”ခဲ့သူ တစ်ဦး အကြောင်း”
ကျွန်တော် ခံစားခဲ့ရတဲ့ “ဝူဟန်းဗိုင်းရပ်”အကြောင်းလေးပါ။
ဘာကြောင့်-ဝူဟန်း ကျွန်တော့် ဆီကို ဆိုက်ဆိုက်မြိုက်မြိုက်ရောက်လာသလဲ?
မလာအောင် ဘယ်လိုလုပ်နိုင် ဆိုတာ နဲ့မလှုပ်နိုင်ဘဲ “နာရီပေါင်း (၁၄၀) ကျော်” ကိုမခံသာတဲ့ “မရာဏာပိဒုက္ခ” ကိုကျော်လာခဲ့ပုံအတွေ့အကြုံလေးပါ။
ပထမဉီးဆုံး-“သေရွာပြန်”ခဲ့တာ ဟာ “ရတနာသုံးပါး ဂုဏ်ကျေးဇူး”ကြောင့်ဆိုတာပါပဲ။
(“Ventilator” မှာ-သေမင်းနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အချိန်မှာ မေတ္တာစူးစိုက်ပို့ပေးနေခဲ့ကြတဲ့,
ဆရာတော် ခေမာဓေမမ္မာ၊အောက်စ်ဖို့ ဆရာတော်၊တိပိဋ္ဌက ရွှေစင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၊ဂုတ်ထိပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး ဦးပညာဝံသ ၊ထိသိ စွန်းလွန်းဆရာတော် ဦးသုမန၊သဘာဝရိပ်သာ မှ ဆရာတော်အမှုးထားပြီး ဘုန်းဘုန်းများ ဆရာလေးများ၊မိုးကုတ်ရိပ်သာ မှ ဆရာလေးများ ။ပြည် ဝိဇ္ဇောဒယ မှ ဆရာသမားများအချိန်ပြည့်တရားအားထုတ်ပြီး သစ္စာတိုင်တည်မေတ္တာပို့နေတဲ့ မိခင်ကြီး ဒေါ်အေးမြင့် ၊ဇနီးမအေးမိုး နဲ့သားသားခရစ္စ ၊ ညီမငယ် မဖြူ အကိုကြီးကိုဝင်း အမကြီး မညောင် မသူဇာ တို့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပြီ မေတ္တာကိုခံစားခဲ့ရပါတယ်။ )
သူငယ်ချင်း “မဥမ္မာလှိုင်”ကလဲ-“သစ်တံခါးဆရာတော်ဘုရားကြီး”ကို အပူကပ်”မေတ္တာပို့ ပေးဖို့ လျောက်ထားခဲ့ပါတယ်”။
“အရိယာ သူတော်ကောင်းကြီးများရဲ့မေတ္တာ”နဲ့သေတွင်း ကလွတ်ခဲ့ပါပြီ။
အကြိမ်ကြိမ် ဦးတိုက် ကန်တော့ပါတယ် ဘုရား။
အတိတ် က ပြုခဲ့တဲ့”ဝဋ်”တွေ အကျိုးပေးဖို့အချိန် မှီလာလို့ပါ။
“ပိုင်းလော့ဆရာတော်”ပြောတဲ့-“အချိန်တိုင်း တွေးနေရင်း ဘဝ ပြောင်းသည်”ဆိုတဲ့အချက်ကြောင့်ပါ။
ကျွန်တော် ဟာ မနေတတ်/မထိုင်တတ်“ဝူဟန်းဗိုင်းရပ်”ကို နေ့/ညအချိန်ပေါင်းများစွာ source ပေါင်းများစွာက follow လုပ်ပါတယ်၊”covid ဂုဏ်တော်ပွါးများနေတယ်”လို့ပဲ ဆိုပါတော့။
အဲ့ဒီတော့ လာပြီပေါ့ ကိုယ့်ဆီကို၊ဘာဆန်းမလဲ။အချိန်တိုင်းတွေးနေရင်း ဘဝ ပြောင်းပြီလေ။ဒီအချက်က ရှောင်လို့ရပါတဲ့ covid ကို follow မလုပ်ကြပါနဲ့-ကြောက်လဲမကြောက်ကြပါနဲ့ ၊သောက လဲမရောက်ကြပါနဲ့။ကိုယ့်တရားကိုယ် အာရုံပြုရင် အလွယ်တကူလွတ်မြောက်နိုင်ပါတယ်မနေတတ်တာ အခုမှ မဟုတ်ပါ။
“ရွှေဝါရောင်အရေး”တုန်းကလဲ ဒေါသ ဝမ်းနည်းမှုတွေနဲ့ အရင်ဆုံးပူလောင်သူကကိုယ်ပါ။စီးပွါးတွေပျက် ပစ္စည်းတွေ ဆုံးရှုံး ကြုံခဲ့ပြီးပါပြီ။အချိန်တိုင်းတွေးနေရင်း ဘဝပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။“အမျိုးသမီး တစ်ယောက်”က”သူနာပြုဆရာမလေး”ကို”စက်ရုပ် မို့ အိမ်မှာ နေ ရမှာလား?” တို့”ပြည်တော်ပြန် တွေ သတ်ပစ် တစ်ကောင်မှ အထင်မကြီးဘူး”-ဆိုတဲ့ပိုိ့စ်တွေကြောင့် ဝမ်းနည်း စိတ်မကောင်း ဖြစ်ရပါတယ်။
ဒါဟာ-“အကုသိုလ်စိတ်”ပါ။”အကုသိုလ်” အကျိုးပေးတွေ အချိန်မှီပြီလေ ။ဒါဟာ ရှောင်လို့ရတဲ့အချက်ပါ။
ဒါက-“ဝူဟန်းဗိုင်းရပ်စ်ရောက်လာခြင်းအကြောင်း”ပါပဲ၊အလွယ်တကူ ရှောင်လို့ရတဲ့ အချက်ပါ။
(၂) ဆေးရုံက Intensive Care မှာventilator ပေါ်မှာ နာရီ (၁၄၀) ကျော်
ကျွန်တော် “အပျင်းဖျား”ပြီး”တစ်ပါတ်”အကြာမှာချောင်းဆိုး လာပါတယ်။
(၃)ရက်လောက်ကြာတော့ နှာခေါင်းထဲ “ဆီကြော်အနံ့”လိုရပြီး အသက်ရှုကြပ် လာပါတယ်။တကယ်တော့ ဘာ အနံ့ မှ မရှိပါဘူး။
“အောက်စီဂျင် level (၈၇)”အထိထိုးကျလို့”ဆေးရုံ”ရောက်ခဲ့ပါတယ်။
ဆေးရုံမှာ-“အောက်စီဂျင်”ပေးထားတဲ့ကြားကတက်မလာဘဲ -“အဖျား (၃၉)” ကနေ မကျဘဲ,”နှလုံးခုန်ှုန်း,သွေးပေါင်ချိန်”ကျသွားလို့သတိလစ် သလိုဖြစ်သွားပါတယ်။ဆရာဝန်တွေ/ဆရာမတွေက-“မသွားနဲ့ ငါတို့နဲ့နေပါ”-ဆိုပြီးတစ်ယောက်ဖက် ထားပြီး ဝိုင်းအော်နေတာ ကြားပါတယ်။ချက်ချင်းပဲ-ventilator machine ပေါ်တင်တော့တာပါပဲ။”မေ့ဆေးဆရာဝန်”က”မေ့ဆေး”ပေးပြီး-“လည်ချောင်းအပေါက်ဖောက်””ပိုက်”မျိုးစုံထည့်”နှာခေါင်းပိုက် နှလုံးခုံစက်အစုံ”ပါပဲ။” Ventilator ပေါ်တင်”ပြန်ရှင်တဲ့သူ အရမ်းနဲတယ်”ဆိုတာသိထားပါတယ်။
မေ့ဆေးပြယ်တော့ ဆရာဝန်တွေက ရှင်းပြကြပါတယ်။အိပ်ရာ လဲဖျာကပ်ပေါ့၊လှုပ်လို့လဲမရတော့ပါဘူး။ကျွန်တော် ဟာ “တရားကိန်းသူ”မဟုတ်ပါ။”အညံ့စား ပုထုဇဥျ တဈဦး”ပါ။
တရား ကိုမရဏာပိဒုက္ခ ကို ရင်ဆိုင်နိုင်လောက်အောင်နေကောင်းစဉ်က အားမထုတ်ထားခဲ့ပါ။
“ပုထုဇဉ် တစ်ယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုရင်ဆိုင်မလဲ?”ဆိုတာစ စဉ်းစားရတော့တာပါပဲ။
တစ်ခုတည်းသော အားကိုးရာ “ရတနာသုံးပါး”ပါပဲ။
“အဖျား (၃၉ံ)”နဲ့အသက်မနဲရှုနေရတာဘယ်က တရား စ မှတ်မလဲ?
လျော့ချလိုက်တာနဲ့-“သဘာဝ သဘောခန္ဓာ” စမြင်တော့ပါပဲ။အလုပ် စ ရပြီပေါ့။”ဝေဒနာ”ကပြင်းလွန်းလို့ မျောသွား/လွတ်သွားပြန်တာပဲ။ဒီတခါ-“စွန်းလွန်းဆရာတော် ဦးသုမန”-ဆေးရုံမတက်ခင်”အေးစေငြိမ်းစေ” တရားပေးထားပါတယ်။”အာနာပါန”နဲ့ “အေးစေငြိမ်းစေ” စတင်ပါတယ်။စပြီး တည်ငြိမ် လာပါပြီ။
နဲနဲ “စိတ်”နဲ့ “ရုပ်”ကိုခွါလာနိုင်တော့-“ပြည် ဝိဇေဇာဒယ” ရဲ့ “အရှုဈာန်”တင်တော့တာပဲ။”ရုပ်”ပေါ်မှာ”ဈာန်”နဲ့ခွါသလို-“အောက်စီဂျင်”လဲ တက်လာပါတယ်။နောက် တော့-မျောလိုက် မေ့သွားလိုက် နဲ့ လုံးခြာလိုက်နေပါတယ်။
သတိရ တာနဲ့ “သဲအင်းဆရာတော်ကြီး”ရဲ့ “ကော့မူးရှုကွက်”တရားတင်တော့တာပဲ။”ရှုကွက်”က-“ဖောက်ပြန်တဲ့ရုပ်သဘော”နဲ့”သိတတ်ခံစားတတ်တဲ့ နာမ်တရားလေးပဲရှိတယ်”-ဆိုတာ။
“ဘာဘဲ ပေါ်လာ-ချုပ်ပျောက်သွားတာလေးတွေကငါမဟုတ်ဖူး”-လို့လိုက် သိပေးနေပါတယ်။
“ငါဖြင့်သေရေတာ့မယ် မိသားစုနဲ့ခွဲရတော့မယ်”-ဆိုတဲ့”သောက”တွေမရှိတော့ပါဘူး၊အရာရာ တရစပ် ချုပ်နေတာကိုး။ဉာဏ်အား နဲနဲ အထောက်အကူ ရတာနဲ့-
“သဘာဝ ဆရာတော်”ရဲ့-“အနတ္တ သဘောခန္ဓာ လေးတွေအခုကြည့်/ အခု မရှိတော့ဘူး”-ဆိုတဲ့”ရှုကွက်”နဲ့ လိုက်တယ်။
“ဆရာလေးခေမာရံသီ”ရဲ့ -“နဂိုကမှ ဘာမှမရှိဘဲတရစပ် အစားထိုး ဖြစ်/ပျက် နေကြတာ”- ကို တင်ရှုပါတယ်။
“စွန်းလွန်း ဦးသုမန” ရဲ့ –
“ငါခံနေရတယ်”-ဆိုတာကလွတ်လာပါပြီ။”မိသားစု”ကိုလည်း မစွဲတော့ပါဘူး၊အေးအေးဆေးဆေး ဘဝကူး နိုင်ပါပြီ။
“မကောင်းတဲ့ လားရာဂတိနိမိတ်”တွေ လုံးဝ မတွေ့ရပါဘူး။
ပုထုဇဉ်တစ်ယောက်အနေနဲ့အပါယ်တံခါး တစ်ဘဝ လောက်ပိတ်အောင် လုပ်နိုင်ခဲ့ပါပြီ။
“မင်းအသက်ဘေးကလွတ်ပြီ”ဆိုပြီး ဝမ်းသာအားရ လာ ပြောကြပါတယ်။
အဲဒီကနေ-ရိုးရိုး ward မှာ အားပြန်ရှိအောင်နေရပါတယ်။အခုပဲ ဆေးရုံက စိတ်ချရပြီ မို့ အိမ်ပြန်ခွင့်ရပါပြီ။
“ဆေးရုံ”က “ဝန်ထမ်းများ”ဟာ-ကျွန်တော် အသေကောင်တ မျှပျက်စီးနေတာကိုမငြိုမငြင်/ယုယုယယ ပြုစုကြတာ အံ့လို့မဆုံးပါဘူး။
ဘယ်လိုအသားရောင်/လူမျိုးကိုဖြစ်ဖြစ်မေတ္တာထားနိုင် “NHS National Healthcare Services (United Kingdom) ဝန်ထမ်းတွေ”-ကိုကြည့်ပြီး- မျက်ရည်ဝဲ တဲ့အထိ ကျေးဇူးတွေ တင်မိပါတယ်။
ပြောတာလည်း များသွားပြီ။”အကုသိုလ် အခေါ်တရား”တွေ ရှောင်ကြပါ၊
“စိတ်ညစ်နွမ်း”စေ “သောက ဒေါသ”ဖြစ်စေမဲ့ ပိုိ့စ်တွေ မရှယ်ကြပါနဲ့။မြင်ရင်လဲ သူငယ်ချင်းတွေကိုပူလောင် “အကုသိုလ်”များအောင် မရှယ်ကြပါနဲ့။အားလုံးဘေးဆိုးကြီးကလွတ်မြောက်ကြမှာပါ။
ချမ်းသာကြပါစေ၊ အေးငြိမ်းကြပါစေ၊သံသရာ ဝဋ်ဆင်းရဲမှ လွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေ။
ရစေိုတဲ့ Mask တှကေ ကိုဗဈပိုးကို မကာကှယျနိုငျဘူးလို့ ပညာရှငျတှသေတိပေး